25 mitsara naGustavo Adolfo Bécquer pagore rekuzvarwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Ndiani asingazive mavhesi aya? Ndiani asati ambodzokorora imwe yenhetembo dzake? Ndiani angave aripo munyika nepasi rose uyo asingazive Gustavo Adolfo Becquer? Nekuti nyanduri weSevillian anoonekwa se mumwe wevanyori veSpanish anoverengwa zvakanyanya wenguva dzose. Uye akaberekwa pazuva rakafanana nanhasi, Kukadzi 17, asi 1836. Mune mamwe mazwi, kupedzisa vhiki ino yerudo, hapana chinhu chiri nani pane kupedza mazuva mashoma aya kuti uverenge basa rake.
Kubva kumhuri yevaartist, apo Bécquer akatanga kunyora nhetembo Spain yaive mutsika yakanyudzwa mune chokwadi, hunyanzvi hwekuita sezviri pachena hunopesana ne kudanana nguva. Basa rake rinozivikanwa nderake Rhymes uye ngano, muunganidzwa wenhetembo uye nyaya pfupi. Nhasi tinorangarira mamwe emitsara yake yakanaka kwazvo.
Bécquer akafa achiri mudiki kwazvo, aingova nemakore makumi matatu nemana chete uye nechirwere chetibhii (aigona sei kunge asiri mudetembi werudo?). Uye ipapo ndipo pakave nebasa rake uye rakakurumbira. Asi isu tiri kupemberera kuzvarwa kwake uye nebasa raakatisiira.
Izvi ndizvo 25 emitsara yake inozivikanwa:
Panogona kunge pasina vananyanduri, asi pachagara paine nhetembo.
Kugomera mweya uye kuenda kumhepo. Misodzi imvura uye vanoenda kugungwa, ndiudze mukadzi, kana rudo rwukanganwika, unoziva kwarunoenda here?
Kusurukirwa ihwo humambo hwekuziva.
Uye iyo pfungwa inofanirwa kuishandisa, zvinokodzera zuva rega rega uye zvakare uye zvakare kufunga, kuchengetedza hupenyu hwepfungwa.
Chiitiko cheakanaka, mune chero chimiro chaanoratidzwa, chinosimudza pfungwa kune zvishuwo zvakanaka.
Mweya unogona kutaura nemaziso awo unogonawo kutsvoda nemeso ayo.
Uyo ane fungidziro kuti zviri nyore sei kuti abudise nyika kubva pasina.
Uropi hwangu hwenyonganiso, maziso angu kuparadzwa, hunhu hwangu hapana.
Kusurukirwa kwakanaka kwazvo ... kana iwe uine mumwe munhu wekuudza.
Rudo chinhu chakavanzika. Zvese zviri maari zvinoitika izvo zvisingatsanangurike; zvese nezvake hazvina musoro, zvese nezvake hazvina kujeka uye hazvina musoro.
Kuti utarise, nyika; kunyemwerera, denga; kwekutsvoda ... handizive chandaizokupa iwe kutsvoda!
Zuva rinogona kunge riine makore nekusingaperi, gungwa rinogona kuoma kwechinguva, axis yepasi inogona kutyoka segirazi risina simba ... Zvese zvichaitika! Rufu runogona kundifukidza nehunhu hwayo hwemafaro, asi murazvo werudo rwako haugone kubuda mandiri.
Iwe unoda kuti isu tigare tichifunga zvinotapira ndangariro zverudo urwu? Zvakanaka, ngatidananei zvakanyanya nhasi uye mangwana ngatitaurirane!
Pfungwa mbiri dzinobuda panguva imwe chete, kutsvoda kuviri kunoputika panguva imwe chete, maungira maviri anobatana, ndiyo mweya yedu miviri.
Zvinosiririsa kuti Rudo, duramazwi, harina nzvimbo yekuwana kana kuzvikudza kuchingova kudada uye kana kuri chiremerera!
Rudo inhetembo; chinamato rudo. Zvinhu zviviri senge chetatu zvakaenzana kune imwe.
Kana nguva ichifamba uye iwe uchindikanganwa, iwe uchagara chinyararire mandiri; nekuti murima remifungo yangu, ndangariro dzese dzinondiudza nezvako.
Kana kupatsanurwa kwemweya kuchigona kuitwa, vangani vakafa vasinganzwisisike vangatsanangurwa.
Iwe unoti une moyo, uye unongotaura chete nekuti unonzwa kurova kwayo; uyo hausi moyo ... Ndiwo muchina unofambisa kuenda kunorova unoita ruzha.
Simbi painobvarurwa kubva muronda, rudo rwake rwakabvaruka kubva mukati mangu, kunyangwe ini ndainzwa sezvandakaita kuti hupenyu hwangu hwaibvaruka kubva pandiri naye!
Iye ane mwenje, iye ane pefiyumu, ruvara uye mutsetse, chimiro-chinokonzera chimiro, chirevo, chisingaperi sosi yenhetembo.
Nhasi pasi nedenga zvinondisekerera, nhasi zuva rasvika pakadzika kwemweya wangu, nhasi ndariona… ndariona uye rakanditarisa…. Nhasi ndinotenda muna Mwari!
Chema! Usanyara kupupura kuti wakandida zvishoma.
Zvese manyepo: kubwinya, goridhe. Zvandinonamata ndezvechokwadi chete: Rusununguko!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » 25 mitsara naGustavo Adolfo Bécquer pagore rekuzvarwa kwake
Kurapa kwekunyora, kubatsirwa kwepfungwa dzedu